11 ruux oo ku dhintay duqeyn dhinaca cirka ah ee lagu qaaday isbitaal kuyaala waddanka Yemen – The Voice of Northeastern Kenya
11 ruux oo ku dhintay duqeyn dhinaca cirka ah ee lagu qaaday isbitaal kuyaala waddanka Yemen
Ugu yaraan 11 ruux ayaa lagu dilay halka 19 kalena ay dhaawacyo ka soo gaaren duqeyn dhinaca cirka ah ee lagu qaaday isbitaal kuyaala waqoyi galbeed ee waddanka Yemen sida laga soo xigtay hay’ada dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF kuwaas oo maamulka isbitaalka gacanta ku haayay.
Duqeyntan dhacday shalay ayaa waxa lala eegtay isbitaalka Abs ee kuyaala gobolka Hajja gobolkaas oo ay gacanta ku haayan dagaalyahanada xutiiyinta ah waxana durbadiiba ku geeriyooday weerarkaas 9 qof oo u ku jiray shaqaale ka tirsan hay’ada dhaqaatiirtan aan xuduuda lahayn ee MSF.
2-da qof oo kale ayaa waxa ay iyagana geeriyooden iyago loola cararaayay isbitaal kuyaala waddanka Yemen halka shan kalena xaladooda loola tacaalayo sida ay sheegtay hay’ada MSF.
MSF ayaa sheegtay in duqeyntan ay geeysteen xulafada caraabta ee isbahaystay kuwaas oo dagaal kula jiro dagaalyahanada xutiyiinta ah waxana ay dhamaan dhinacyada ku dagaalamaaya waddankaas ay ka codsatay in aysan marnaba soo labaan dhacdooyinka noocaas oo kale ah.
Teresa Sancristoval oo ah haweeneyda maareysa barnaamijada deg dega ee hay’ada MSF ee waddanka yemen u qaabilsan ayaa waxa ay sheegtay in ay dhacdadaan tahay tii 4-aad ee duqeymaha dhinaca cirka ah ee lagu qaado sanadkan gudihiisa isbitaalkaas oo ay maamusho hay’ada.
Warbixin ay MSF soo saartay ayaa waxa ay ku sheegtay in xiliga isbitaalka loola beegsanaayay duqeyntan ay 25 bukaan qalin ku socotay,25 waxa ay ku jireen qeybta isbitaalka ee dhalmada waxa sidoo kale isbitaalka ku sugnaa 13 dhalaan ah iyo 12 carruur ah oo iyagana waqtigaas la dabibaayay.
Weerarka isbitaalka lagu qaaday ayaa yimid 2 maalin kadib marki weerar isna lagu qaaday school ku yaalay magaalada Haydan ee gobolka waqoyi galbeed ee saada waxana ku dhintay 10 carruur ah oo wax ka baraneysay dugsigaas weerarka lagu qaaday halka 30 kalena ay ku dhaawacmeen sida laga soo xigtay MSF.
Carruurtaas ay waxyeelada ka soo gaartay weerarkaas ayaa waxa da’dooda lagu sheegay in ay u dhexeysay 8 sano ilaa iyo 15 sano.
Yemen ayaa waxa dagaalada sokeye ay ka socdeen tan iyo sanada 2014-ka kadib marki ay dagaalyahanada xutiyiinta kuwaas oo dacad u ah madaxweynihi hore ee waddankaas Ali Abdullah Saleh ay qabsadeen qeybo badan ee waddanka Yemen taas oo ay ku jirtay magaala madaxda waddankaas ee sanca.
Ciidamada carabta ah ee isbahaystay oo ay horkacayso waddanka Saudi Arabia ayaa waxa ay duqeymaha dhinaca cirka ah ka bilaaben waddankaas biisha March ee sanadkii 2015-ka.
Dagaalada sokeye ee waddankaas ayaa waxa ilaa iyo hadda ku dhintay 9,000 oo qof halka 2.8 milyan oo qofna ay ka barakaceen guryahooda.
← Isbahaysiga Jubilee oo la weydiiyay in ay sheegan halka ay ka keenen lacagaha ay u adeegsanaayan in ay ku mideeyan xisbiyada dalka ka jiro
Basaska Schoollada oo laga mamnuucay in ay habeenki safraan →